रोचक Archives - Page2of 33 - Daily Lokmandu
यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन , भनिन्छ मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन , पुरुष र महिला , तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन ।जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । . वास्तवमा , ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन , यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष दुवैको गुण समावेश हुन्छ । यस्ता मानिस वााहिरबाट पुरुष देखिन्छन तर भित्रि रुपमा महिलाहरुको गुण हुन्छ , यस्तै बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन ।कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ट्रांसजेंडर डाक्टरहरुका अनुसार प्रेग्नेंसीको पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको लिंग बन्ने गर्छ । शिशुको लिंग निर्धारणको प्रोसेस अवधिमा यदि कुनै प्रकारको चोट, टाक्सिक खानपान, हार्मोनलको समस्याले गर्दा शिशु महिला या पुरुष बन्ने भन्दा पनि दुवैको गुण वा
कुकुरसँग किन यौन सम्पर्क गर्छन् महिलाहरु हेर्नुहोस् आज थाहा पाउनु होस ।।
डा. राजेन्द्र / म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ भनिन्छ, पिसाबमा यसको असर देखिन्छ ? असर परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुकुर सँगको यौन सम्पर्क यौन मानिसको एक अभिन्न कुरा हुँदाहुँदै पनि यो एकदम गोप्य कुरा पनि हो । यौनसम्बन्धी कतिपय क्रियाकलापको सन्दर्भमा समाजको आ–आफ्नै नियम एवं मूल्य–मान्यता हुन्छ । सामान्यत: मानिसहरूले त्यसकै परिधिभित्र रहेर व्यवहार गर्छन्, तर समाजका नियम वा मान्यताभन्दा फरक किसिमको व्यवहार गर्ने व्यक्ति पनि समाजमा नहुने होइनन् । यस्तो व्यवहारलाई अंग्रेजीमा प्याराफिलिया भनिन्
नदीभित्र रहेको यो ७ सय वर्ष पुरानो मन्दिर, जती पटक डुब्दा पनी जस्ताको तस्तै
एजेन्सी । ७ सय वर्ष भन्दा पहिले चीनमा निर्माण भएको एक मन्दिर अझै पनी जस्ताको तस्तै रहेको छ । चीनको इजोऊ प्रान्तमा रहेको यांग्त्से नदीको बिचमा रहेको यो मन्दिर हजारौँ पटक पानीमा डुबिसकेको छ । तैपनी यो मन्दिर जस्ताको तस्तै रहेको छ । यो नदीमा आएको बाढीले मन्दिरलाई कुनै पनी किसिमको नोकसानी गरेको छैन । चीनमा कुनै समय शासन गरेका सोन्ग वंशका शासकहरुले बनाएको यो मन्दिर उक्त शासकहरुले नदिको चिमै बनाउन लगाएका थिए । उक्त मन्दिर गत वर्ष पनी अधिकांश समय पानीमै डुबिरहेको थियो । अहिले भने केही मात्रामा मन्दिर देखिएको छ । यो मन्दिरको आधा भाग जहिल्यै डुबिरहेको हुन्छ । मानिसहरु यहाँ ढुंगा चढेर जाने गरेका छन । यो पनि पढ्नुस मृगौला सफाई कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस घरेलु उपचार विधि मृगौला खराब भएर बर्षेनी सैयौंले ज्यान गुमाउँछन् । मृगौला शरीरको यस्तो अंग हो, जसको अनुपस्थितीमा शरीरको कार्यसंचालन हुन स
वैशाख १ गतेबाट नयाँ वर्ष विक्रम संवत २०७६ को आरम्भ हुँदैछ । सबैले आफ्नो घर सफा होस्, सजिएको होस्, बलियो होस्, खुसी छाओस, परिवारमा सबैको राम्रो सम्बन्ध होस्, भविष्यमा सकारात्मक योजना बनोस, उत्साह होस् भन्ने कल्पना हामी सबैको हुन्छ । तर घरलाई राम्रो बनाउने प्रयासमा कतिपय मानिसहरु असफल हुने गर्दछन् । त्यसैले नयाँ वर्षमा नयाँ केहि होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने यस्ता रहेका छन् केहि उपायहरु: १. भित्ता भत्किएको, प्वाल भएको , जालो, बिग्रिएको झ्यालहरुले हाम्रो मनलाई प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यस्ता समस्याहरुलाई मर्मत गर्न जरुरी रहेको छ । सामर्थ्यको अनुसार घरमा रङ-रोगन गराउनुहोस् । यदि बच्चाको शिक्षा, बुद्धिमानी, युवावस्थाको विकासलाई राम्रो राख्न चाहानुहुन्छ भने पूर्व दिशालाई ठिक राख्न अति आवश्यक छ । यस दिशामा ईन्द्रको प्रभाव रहने गर्दछ । यस दिशामा मेष र वृष राशि तथा शुक्
साताको मंगलबार भगवान गणेशको ब्रत बस्ने गरिन्छ । मानिसले आफ्नो मनोकामना पूरा गर्न भगवान गणेशको ब्रत बस्ने देखि लिएर विभिन्न किसिमका फलफुल, लड्डु र पैसा पनि चढाउँछन्। अहिलेको यो समय भगवान गणेशको उत्सवको रुपमा हेरिन्छ । यो समयमा गणेश भगवानलाई एक मन्त्र जप गरेमा हर संकट हटेर जाने विश्वास रहँदै आएको एक ज्योतिषाचार्य पं. प्रवीण द्दिवेदीले बताएका छ्। उनले भनेका छन् बुध ग्रहसँग जोडिएको दोष पनि कमगर्न सकिन्छ। यस्ता छन् तीन मन्त्र १) श्री गणेशाय नमः २) ऊँ गंण गणपतताय नमः ३) ऊँ विघ्नेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्ने विधि विहान नुहाएर शुद्ध भएपछि भगवान गणेशको मन्दिर, मूर्ति वा तस्विर रातो कपडाले ढाकेर स्थापित गर्ने। भगवान गणेशको पूजा गरेर फुल अक्षता, ध्यू चढाएर अगरबत्ति बाल्ने अनि लड्डु र फलफुल चढाउने। कुशको आसनमा बस्ने र पन्ना वा रुद्राक्षको मालाले कुनै एक मन्त्रले जप गर्ने । कम्तिमा ५
साच्चीकै नागको अण्डा देख्ने हरुलाई फलीफाप हुन्छ त ! यस्तो छ सच्चाई देखि झुट
साच्चीकै नागको अण्डा देख्ने हरुलाई फलीफाप हुन्छ त ! यस्तो छ सच्चाई देखि झुट साच्चीकै नागको अण्डा देख्ने हरुलाई फलीफाप हुन्छ त ! यस्तो छ सच्चाई देखि झुट;मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो। अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो। प्रकृतिका विविधरुपलाई फरक फरक शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको विश्वासमा वहुदेववादको कल्पना गरियो।विश्वको हरेक सभ्यतामा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ। आदिम सभ्यताको उत्खनन्बाट प्राप्त पुरातात्विक सामाग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृतिपूजक रहेको पुष्टि हुन्छ। फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्यावरण अनुसार पूजा, उपासना र साधना पद्धति फरकफरक हुन्छ। हिन्दू धर्म र दर्शनमा प्रकृति लगायत समस्त
यी १३ बस्तु घरमा राख्नुस ! सुख,शान्ती,समृद्धि र धन लाभ हुनेछ,
भनिन्छ, कर्मभन्दा ठूलो कुनै धर्म हुँदैन, तर हिन्दु धर्ममा कर्मका साथ–सार्थ धर्मको पनि खास महत्व हुन्छ । त्यस्तै, हिन्दुधर्ममा मांगलिक प्रतीकहरुको आफ्नौ महत्व हुन्छ । यस्ता प्रतिक, वस्तुहरु राख्नाले कुनै पनि काममा अवरोध आउँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। ओम : सर्वोपरि मंगल प्रतीक – यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रतिक हो । अ,उ,म तीन शब्दबाट बनेको ओमको अर्थ हुन्छ उपनिषद् । यसमा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको प्रतीक तथा यो भूः लोक, भूवः लोक र स्वर्ग लोकको पनि प्रतिक हो । तामा, पीतल तथा अष्टधातुको ओम घरमा राख्ने गरिन्छ ।स्वास्तिक – स्वास्तिकलाई शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि र मंगलको प्रतिक मानिन्छ । यो मंगल प्रतीक गणेशको उपासना, धन, वैभव र ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पूजामा विशेष स्थान छ । यसको चारै दिशाहरुको अधिपति देवताहरु, अग्नि, इन्द्र, वरुण एवम् सोमको पूजा हेतु एवप्ं सप्तऋषिहरुको आशीर्वाद प्राप्त गर्नका लागि प्रयो
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो सुन रङ्गको नाग जसले तपाइको भाग्य चम्काउछ !
मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो । अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो । प्रकृतिका विविधरुपलाई फरकतपाई भाग्यमानी कि अभागी?? यो गुफाको तस्बिर छोएर राम्ररी हेर्नुहोस, भाग्यमानीले मात्र भगवान देख्ने बिश्वास छ फरक शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको विश्वासमा वहुदेववादको कल्पना गरियो । अतः विश्वको हरेक सभ्यतामा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ । आदिम सभ्यताको उत्खनन्बाट प्राप्त पुरातात्विक सामाग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृतिपूजक रहेको पुष्टि हुन्छ । फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्यावरण अनुसार पूजा, उपासना र साधना पद्धति फरकफरक हुन्छ । हिन्दू धर्म र दर्शनमा प्रकृति लगायत समस्त विश्वकल्याणको लागि उपासना र प्रार्था
पहिले आउँ भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो । एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो । भाकल गर्ने व्यक्तिले केही पाउँ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस, बिरामी हँुदा ठीक होस वा कसै सँग टाढा बसौं भनी आप्mनो ईच्छा अनी आफुले छनौट गरी त्यसो पुरा गरेमा म यो दिन्छु वा यसो गर्छू वा कुनै कुराको बली दिन्छु अथवा भेटी पैसा नै चढाउँछु भनी कुनै मन्दीरमा या आप्mनो मन मनै गरिने भाका हो । भाकल देवी देवतालाई गरीने अत्यन्तै महत्वपूर्ण बाचा हो र यो पुरा गर्नै पर्दछ । किनकी भाकल गर्ने व्यक्तिले यसो गर्छु गर्दिन भनेर बाचा कसम खाएको हुन्छ । देवी देवतालाई गरिने भाकल भनेको एक गम्भीर कुरा हो भनी हाम्रो धर्म शास्त्रले बताएको छ l धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कुनै मानिसले देवीदेवताको निम्ती भाकल गर्छ भने त्यो भाकल कहिले पनि भंग गर्न हुदैन । जसको मन बाट जुन
रोइरहेको शिशुलाई स्तन चुसाउने एयर होस्टेज पत्रिसाको बढुवा
एयर होस्टेज पेसा संसारका धेरै युवतीको रोजाइमा पर्छ । नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकका सुन्दरीहरु एयर होस्टेज बन्न लालयित हुन्छन् । आमसर्वसाधारण पनि यो पेसालाई मर्यादित रूपमा लिन्छन् । एयर होस्टेजको आकर्षक शरीर र उही प्रकारको ‘ड्रेस अप’ ले सबैको मन खिच्छ । बेलाबेलामा उनीहरूले गर्ने सामाजिक कामको पनि सर्वत्र चर्चा हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एयर होस्टेज पत्रिसा ओरगानोले शिशुप्रति देखाएको ममता । उनले विमानमा सवार एकमहिने शिशुलाई आफ्नो स्तन चुसा एर मातृप्रेमको नमुना प्रस्तुत गरेकी छन् । फिलिपिन्स एयरलाइन्सको विमानमा यात्रारत आमासँग रहेको दूधको पाउडर सकिएर शिशु भोकले रुन थालेपछि पत्रिसाले आफ्नै स्तन चुसाएर उदाहरणीय काम गरिन् । बच्चा रुन थालेपछि उनकी आमालाई बच्चालाई दूध खुवाउन आग्रह गरिएको थियो । आमाले आफ्नो दूध नआउने र पाउडर दूध पनि सकिएको बताएपछि एयर होस्टेज पत्रिसाले आफ्नै
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक नेपाली युवकको निधन,,,,,,,,,,,,,,,,रिप लेखेर श्रद्धान्जली दिनुस मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
संगै सुतेका छोराले खुलाए रिनाबारे नौलो रहस्य: बारम्बार फोन गर्ने व्यक्तिको को थिए ?
३० फिट अग्लो शिवको मूर्ति निर्माणका लागि पशुपतिमा ३० लाख सात क्वीन्टल धातु सङ्कलन (दान स्वरुप लाइक कमेन्ट सयर गर्नुहोला)
संगै सुतेका छोराले खुलाए रिनाबारे नौलो रहस्य: बारम्बार फोन गर्ने व्यक्तिको को थिए ? (51)
२०७६ सालमा यी ६ राशिलाई पर्दै छ महाँसंयोग सहितको भाग्यफल, कुन राशिलाई कस्तो फाईदा देखि असर (36)
मालिका मन्दिर जहाँ चिच्याएर मागेको वर अवस्य पूरा हुनेछ, सेयर गर्नुहोस मनले चिताएको पूरा हुनेछ (18)
यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु : ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस । (17)
श्रीमान विदेशमा , डेरा गरेर बसेकै घर अगाडि भेटियो नग्न अवस्थामा महिलाको शव ! (15)
अत्यत दुखद खबर !मनकामना दर्शन गर्न जाँदै गरेको बस दुर्घटना (10)
३० फिट अग्लो शिवको मूर्ति निर्माणका लागि पशुपतिमा ३० लाख सात क्वीन्टल धातु सङ्कलन (दान… (8)
ट्याक्टरको ठक्करबाट सशस्त्र हवल्दारको मृत्य,,,,,,,,,,,, (7)
२०७६ सालमा यी ६ राशिलाई पर्दै छ महाँसंयोग सहितको भाग्यफल, कुन राशिलाई कस्तो फाईदा देखि असर (14,276)
श्रीमान विदेशमा , डेरा गरेर बसेकै घर अगाडि भेटियो नग्न अवस्थामा महिलाको शव ! (12,837)
साबधान ! आमा-बुबाको यस्तो सानो गल्तिले नै “तेस्रो लिङगी”जन्मिनछन्!! (8,830)
कुकुरसँग किन यौन सम्पर्क गर्छन् महिलाहरु हेर्नुहोस् आज थाहा पाउनु होस ।। (8,443)
पथरीमा कन्सर्ट हेर्न गएकी महिला नग्न अबस्थामा मृत भेटिइन्, बलात्कार पछि हत्या भएकाे आशंका (4,518)
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर : यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने… (4,502)
भाकल के हो ? के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ ? नबुझाउँदा के हुन्छ ? (4,335)
विप्लव नेतृत्वको नेकपा द्वारा भोलि बैशाख ५ गते नेपाल बन्दको घोषणा ! (4,320)